Vaovao - niseho tao amin'ny EUROSATORY i Heweiyongtai
11-15 jona 2018, ny Eurosatory biennial dia nanana ny fisokafan'ny marika tao amin'ny Centre Nord Villepinte Exhibition Center. Ekipa mpivarotra varotra iraisam-pirenena any Heweiyongtai dia mandray anjara amin'ny fampirantiana ary mampiseho ny sasany amin'ireo vokatra misolo tena anay. Nandritra ny fampirantiana dia tanterahina tamim-pahombiazana ny salon 172 an'ny Indostrian'ny polisy.
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd., amin'ny maha solontenan'ny orinasa teknolojia avo lenta ny indostrian'ny polisy sinoa, dia nanatrika ny fampirantiana ary nandeha nitety ny tsena iraisam-pirenena. Nasehonay ny sasany amin'ireo vokatra teknolojia avo lenta misy anay, toy ny rafitra fizahana taratra X-ray, mihaino amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny rindrina, mpamantatra ranoka mampidi-doza, fahitana amin'ny alina mazava be, izay mampiseho an'izao tontolo izao ny marika fitaovan'ny polisy any Shina sy ny fivoarana teknika. Nandritra ny fampirantiana dia nihaona tamin'ireo mpanjifa iraisam-pirenena sy namana izay niara-niasa nandritra ny fotoana ela izahay mba hiadian-kevitra momba ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana.
Nandritra ny fampirantiana, ary ny salon 17-n'ny indostrian'ny polisy, nampiantranoin'i Heweiyongtai, dia notontosaina tamim-pahombiazana tany Paris, Frantsa. Ity salon any ivelany ity dia nahasarika orinasa fanta-daza handray anjara, ao anatin'izany ny Yuanda Technical & Electrical, Beijing CBT Machine & Electric Equipment Inc, Tianjin Myway International Trading Co., Ltd, Tangreat Technology (China) Co., Bayern Messe. Ny solontenan'ny orinasa isan-karazany dia niresaka sy nifanakalo hevitra mavitrika, nifanakalo hevitra momba ny fomba ahafahan'ny orinasam-panjakan'ny polisy sinoa mivoatra anaty vondrona, mizaha tsena any ivelany, mizara loharanon-karena. Nofaranana tamin'ny fitaomana lehibe teo amin'ny sehatry ny polisy ity salon ity.
Eurosatory nanomboka tamin'ny 1967, manana tantara 50 taona hatreto. Miaraka amin'ny fitaomana be dia be sy ny taratra manjelanjelatra, io dia iray amin'ireo fampirantiana matihanina manan-danja indrindra amin'ny sehatry ny fiarovana. Amin'izao fotoana izao, ny Eurosatory dia nanjary fampirantiana lehibe indrindra manerantany momba ny vahaolana momba ny tany sy fiaramanidina ary fiarovana sy fiarovana. Io no sehatra tsara indrindra anehoan'ny firenena tsirairay ny tanjaky ny tafika. Ny isan'ny exhibitors sy ny isan'ny mpitsidika isaky ny Eurosatory dia mitombo. Tamin'ity taona ity, orinasa maherin'ny 1.700 avy amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 60 no nandray anjara tamin'ny fampirantiana. Nahatratra 56 ny isan'ny mpampiranty sinoa, izany no isan'ny avo indrindra hatramin'ny nanombohan'ny orinasam-pandraisana anjara tamin'ny fampirantiana nanomboka ny taona 2010.
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd manokana amin'ny R&D, famokarana sy marketing amin'ny fitaovam-piarovana manokana, sampan-draharaha misahana ny fiarovana ny firenena, indrindra ny sampana fiarovana ny besinimaro, taova fanaovana praiministra, fitsaram-bahoaka, herin'ny polisy mitam-piadiana, fadin-tseranana, sns. orinasa lozisialy sy orinasa indostrialy isan-karazany. Heweiyongtai dia natsangana tamin'ny taona 2008 niaraka tamin'ny renivohitra voasoratra 10 miliara sy ny orinasa teknolojia avo lenta. Ny ekipanay dia matihanina ara-teknika sy mpitantana mahay rehetra mba hanomezana tolotra mahafa-po ny mpanjifa. Miaraka amin'ny valin'ny paikadim-pirenena ho an'ny fampandrosoana "Belt One and One Road" (OBOR), dia namorona maso ivoho izahay tany amin'ny firenena 15 mahery. Ny vokatray dia misy fangatahana be ao an-trano sy any ivelany.
Fotoana fandefasana: Jun-11-2018
Fakan-tsary fakan-tsary, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Fitaratra fitiliana fiara, Masinina scanner X-Ray azo entina, Scanner X-Ray Portable, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina,